दाङ-सल्यानको सिमानामा रहेको सिमा बिबाद कहिले अन्त्य हुन्छ ?
देश भित्र पनि यो हाम्रो सिमाना त्यो हाम्रो सिमाना भनेर कुरा उठाउनु त्यति जायज नहोला किनकी देशकै सिमानामा टन्नै बिबादहरु छ । म मान्छु । तर पनि हाम्रो जिल्लाको सिमाना कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर हामीलाई जान्न मन छ । यस्ता बिबादलाई भर्सक चाडै समाधान गरीनु पर्छ । हामीलाई अरु जिल्लाको भुमी चाहिएन हाम्रो जिल्लाको भुमी आखिरी कति रहेछ बस यती छ जान्न मन छ । तत्काल सिमा बिबाद अन्त्य गरियोस । ताकी पछि दङ्गाली दाजु भाइ र सल्यानी दाजुभाइ बिच सिमानाको कारणले मनमुटाब नहोस । किनकी आफ्नो भुमी सबैलाई उत्तिकै प्यारो लाग्छ ।
सल्यान र दाङको सिमानामा [ कालाखोला - (सल्यानको कपुरकोट देखि तल र दाङको राम्री देखि केही माथी)] को भागमा सिमा बिबाद छ रे - दाङ-सल्यानबिच । यो बिबाद धेरै पहिले देखिको हो ।आजसम्म पनि सुल्झिन नसकेको आखिर यो कस्तो सिमाना बिबाद हो ?? किन जिम्मेवार निकायले अहिलेसम्म यसप्रती चासो देखाइरहेको पाईदैन ?? सिमा बिबाद अन्त्य गर्नु दायित्व हो कि होइन ?? के यसमा दाङको दादागिरी छ कि सल्यानको लाचारी छ ???
अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिब रहनु भएका आदरणीय दाइ Ramesh Malla र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार Rishi Adhikari ज्युलाई तत्काल सरकारको तर्फबाट पहल गरी दाङ - सल्यानको सिमानामा रहेको बिबाद सुल्झाउन पहलकदमी भुमिका निर्बाह गरीदिन हुन आग्रह गर्दछु । दुबै जिल्लाका CDO र मालपोत कार्यालयबाट प्रतिनिधिहरु सिमा स्थलमा गएर अनुगमन गरी यसको तत्काल समाधान गर्न आबश्यक छ । र सिमानामा एउटा सिमा स्तम्भ राख्नु पर्छ । यसको लागि दुबै जिल्लाका सरोकारकालाहरुलाई उचित दबाब दिनु हुन आदरणीय माथी उल्लेखित ब्यक्तित्वहरुलाई अनुरोध !
हामी सल्यानीहरुलाई सल्यान छिर्ने बेला सिमानामा एउटा सिमा शतम्भ भएनी हेर्न मन छ । हाम्रो सल्यान कहाँबाट सुरु हुने रहेछ भनेर जान्न धेरै पहिले देखि मन छ हजुर ।
तत्काल सिमानाको समस्याको अन्त्य होस ।